Isi na peeji nke: Mata echiche — HunterThinks.com
My ịda ogbenye ga-aba na-akwụsị m nkwado nke ndị ọzọ: DualDonate
14 Ka 2018
DualDonate na-enye gị ike iji na-akwado ezi na-akpata na-ebuli m nke ịda ogbenye. Na a DualDonate mkpọsa, ọkara ego na-akwado m ụzọ mgbapụ si ịda ogbenye na ọkara ego na-akwado ezi ihe.
16 December 2017 27 December 2014
Need for precision Reduce ambiguity Show distinction between different ideas Show similarities between different ideas Efficient communication Hohfeld’s system is right Explain semiotics (and look for ways it might help us be better writers) Explain atomism Explain system Answer criticism of his system Examples from all major areas of law Who has a “ọrụ” ka
Marilyn nwere baseball ihe ọmụma, ngosi nkà, na ọ na-adọta ndị mmadụ. Ikpokọta niile atọ: ka videos na ya analysis of baseball na-eme ka ego site na mgbasa ozi, sponsorships, na endorsements.
Cairo njem, azụmahịa maka a na-ese foto
N'úkwù-to-hip ruru: a kwaaji maka ịgagharị mbipụta
1 2 … 4 Osote →